La taliyaha Madaxweynaha Puntland ee dhinac amniga oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay Buuraha Golis
Garoowe:-La taliyaha Madaxweynaha Puntland ee dhinac amniga Axmed Doonyaale oo la hadlay saxaafada ayaa waxaa uu ka hadlay dagaakii ka dhacay Buuraha Golis gaar ahaan Togo Sugure, dagaalkaas oo dhexmaray Al-shabaab iyo ciidanka daraawiishta ee Puntlland. La taliyaha Madaxweynaha dowllada Puntland ee dhinac amniga Axmed Doonyaale ayaa ku goodiyey in dagaal adag ay ku qaadi doonaa Saldhiga ay Buuraha Golis ka samaysteen ciidanka ururka Al-shabaab oo ka yimid Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya.
Axmed Doonyaale ayaa qiray in Buuraha Golis ay soo galeen ciidamo ka yimid Gobollada Koonfureed iyo Bartamaha dalka Soomaaliya iyagoo qorshaynaya in ay dagaalo iyo qaraxyo ka fuliyaan degaanada Puntlland si wax deganaasho iyo maamul ah aysan uga jirin.
Doonyaale ayaa sheegay in dagaalkii fool ka foolka ahaa ee dhexmaray ciidanka Puntlland iyo kuwa Al-shabaab ay ciidanka dowladda ku adkaadeen oo ay dileen ilaa 7 askari oo ka tirsan Al-shabaab dhaawacna ay gaarsiiyeen oo rag dagaalka uga dhintay Al-shabaab ay keeneen magaalada Boosaaso ciidanku , balse miino la qaraxday ciidanka dowllada ay kaga dhinteen ilaa 10 askari iyo 2 askari oo dagaalka uga dhintay.
Axmed doonyaale ayaa sheegay in dowllada Puntlland iyo shacabkeeduba ay go,aan sadeen kana midaysan yihiin in ay iska difaacaan ururka Al-shabaab oo duulaan ku ah deegaanada Puntlland isagoo xusay in dowllada Puntlland iyo laamaha amniga ay la socdaan dhaq dhaqaaq Al-shabaab iyagoo Buuraha Golis u soo gala mid mid iyo labo labo kana soo talaaba dhinac badda iyo bariga.
Hadalka ka soo baxay La taliyaha Madaxweynaha Puntland ee dhinaca amniga Axmed Doonyaale ayaa ku soo beegmaya ka dib markii dagaal uu ku dhexmaray Togo Sugure ciidamo ka tirsan al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa Puntlland oo fariisamo ku lahaa degaankaas labo maalin ka hor waxaana ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac.
Ciidanka Puntlland ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ay dagaalo iskaga horyimaadeen ciidanka Al-shabaab ee ku sugan Buuraha Golis waxaan ka dhashay khasaaro soo kala gaaray labada dhinac iyadoo arrinkaas uu sababay in dadka rayidka ahaa ee ku nool degaanada ku dhow dhow Buuraha Golis ay ka bara kacaan.
Dhanka kale Afhayeenka howlgalada ee Ururka Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abu Muscab ayaa guulo ka sheegtay dagaalka dhexmaray ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab wuxuuna sheegay in ay gaarsiiyeen khasaaro.